Hindiya oo digniin kasoo saartay xaaladda Soomaaliya - Awdinle Online
Hindiya ayaa ugu baaqdey hogaamiyeyaasha Soomaalida in ay yeeshaan wadahadalo dhex-gal ah oo ay kusoo afjarayaan caqabadaha sababay dib-u-dhaca doorashooyinka madaxtooyadda iyo baarlamaanka.
Isaga oo ka hadlayey fadhigii Golaha Ammaanka ee Isniintii, danjiraha India ee UN-ka, ayaa rajeeyay in madaxda Soomaalida ay sidda ugu dhaqsiyaha badan ku gaaraan is-afgarad ayna dalka ugu dareeriyaan doorashooyinka.
TS Tirumurti ayaa cod dheer kaga codsaday Soomaalida in ay “mar-xaladdan kala guurka ee muhiimka ah aysan u durbaan tumin rabashaddo”.
“Taas bedelkeeda, waa in ay dhiirageliyaan wadahadalka iyo dib-u-heshiinta,” ayuu hadalkiisa ku daray ergayga oo kalsooni ka muujiyey arrintaasi.
“Ku lamaa shakiga ku aadan in doorashooyinka aysan qabsoomeyn uu sii xoogeysto, waxaa sii cuslaaneysa xaaladda,” ayuu tibaaxay ergayga.
Sidda laga soo xigtay diblumaasiga, Al-Shabaab iyo kooxaha hubeysan ee waddanka ka jira ayaa mar walba oo dib-udhac ku yimaado doorashooyinka waxay u tahay faa’iido, taas oo dhaawaceysa guusha dimuqraadiyadeed ee la gaarey.
Qaylo-dhaanta Hindiya ayaa xoojineysa dhawaaqyo maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayey xubno kamid ah Beesha Caalamka kuwaas oo hogaanka Soomaalida ku boorinayey in ay miiska wadaxaajoodka ku dhameeyaan isqabqabsiga.
Next articleDil ka dhacay degaan ka tirsan Galgaduud & xiisad ka taagan